Vaovao - tavoahangy tsy misy rivotra vaovao Arrival – Fa maninona no mandeha tsy mandeha amin'ny fonosanao kosmetika?
Ny tavoahangy paompy tsy misy hatsiaka dia miaro ny vokatra mora tohina toy ny menaka fikarakarana hoditra voajanahary, serum, fototra, ary menaka fanodinam-bidy tsy misy preservative hafa amin'ny alàlan'ny fisorohana azy ireo amin'ny fitrandrahana tafahoatra amin'ny rivotra, ka hampiakatra ny fiainana talantalana hatramin'ny 15% kokoa. Izany dia mahatonga ny teknolojia tsy misy rivotra ho lasa ho avy vaovao amin'ny fonosana hatsaran-tarehy, fitsaboana ary kosmetika.
Ny tavoahangy tsy misy rivotra dia tsy misy fantsom-pandrefesana fa kosa diaphragma izay miakatra hanaparitaka ny vokatra. Rehefa manindrona ny paompy ny mpampiasa dia mamorona vokany tsy misy dikany izany, manintona ny vokatra miakatra. Ny mpanjifa dia afaka mampiasa saika ny vokatra rehetra tsy misy fako sisa tavela ary tsy mila miahiahy momba ny tabataba izay matetika miaraka amin'ny paompy mahazatra sy fonosana kosmetika izy ireo.
Ankoatry ny fiarovana ny formula anao sy ny fampitomboana ny fiainany talantalana, ny tavoahangy tsy misy rivotra dia manome tombony amin'ny marika ihany koa. Izy io dia vahaolana fonosana avo lenta izay miaraka amina endrika isan-karazany hihaonana amin'ny toeranao hatsarana.
Ny fonosana dia singa iray lehibe amin'ny indostrian'ny tarehy sy ranomanitra. Ny fonosana ao amin'ireo indostria ireo dia tsy mifandraika amin'ny fiarovana sy fiarovana ihany, fa koa mifandraika amin'ny fiantohana fa ny vokatra dia mijanona amin'ny toerana tsara indrindra mandritra ny fitaterana sy ny fitehirizana. Ny fitomboan'ny maha-zava-dehibe ny fikolokoloana samirery, miaraka amin'ny filan'ny taonan'ny taonina, dia nanery ireo orinasa manitra lafo vidy maro hanome izay ilain'ny tsena eo an-toerana. Ohatra, All Good Scents, orinasa manitra manitra lafo vidy monina any Ahmedabad, dia naorina tamin'ny taona 2014. Nampahafantatra ny entany an-tsokosoko tao amin'ny tsena eo an-toerana ny orinasa ary nandrakitra fitomboan'ny varotra 40% amin'ny 2016.
Any Etazonia, ny fitomboan'ny lazan'ny teknolojia fonosana kosmetika mandroso sy ny firoboroboan'ny vokatra fikolokoloana hoditra dia sasany amin'ireo antony lehibe manosika ny fitomboan'ny tsena. Ny fikarakarana ny hoho sy ny ranomanitra dia toa ny ahiahy lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny mpivarotra any amin'ny firenena. Noho ny fitomboan'ny filan'ny kosmetika dia maro ny mpamatsy kosmetika no mandray sy manavao ny vahaolana fonosana vera marani-tsaina hanatsarana ny tombotsoan'ny mpanjifa sy hanatsara ny fiarovana ny vokatra.
Tavoahangy fanosotra amin'ny maso, Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Kaontenera fanosotra kosmetika, Tavoahangy fanosotra kosmetika, Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy, Polonina tavoahangy mainty,